Fampivelarana ny kolontsaina : tafatsangana ny Ako Miantefa | NewsMada
Fampivelarana ny kolontsaina : tafatsangana ny Ako Miantefa
Mirona tsikelikely any amin’ny fahapotehana ny kolontsaina malagasy. Tsy nijanona hatreo amin’ny fanekena izany ny olona maromaro fa nanangana ny Ako Miantefa. Fikambanana naorina ho amin’ny fikajiana sy fampivelarana ny kolontsaina malagasy. Raha ny fanazavan’ny filohany, manomboka amin’ny tontolon’ny hira ny fandaharanasan’ity fikambanana ity. Hitrandraka ireo hira tranainy. Hikajy izany amin’ny alalan’ny fitaovana samihafa mifanaraka amin’izao vanim-potoana izao. Hamadika ny angon-tahiry ho solfezy na naoty. Hanaparitaka ireo rehetra ireo eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina amin’ny alalan’ny fananganana trano fanapariahana mampiasa ny teknolojiam-pifandraisana ankehitriny, sns. Ampahan’ny asa ihany ireo fa midadasika be ny sehatra iasan’ny Ako Miantefa, raha ny fanazavan-dRasetamalala (Lalah), filohan’ny fikambanana.
Tsy ampy ny fitanisana fa mitady ho difotra ny kolontsaina malagasy
« Aleo amin’ny alalan’ny asa no hanavotana ny fahapotehan’ny kolontsaina malagasy. Tsy ampy intsony ny fametsovetsoina fotsiny ny zava-manjo io kolontsaina sy zavakanto malagasy io fa mila miasa isika », hoy ihany ny filohan’ny Ako Miantefa. Nanteriny sy nanaovany antso anefa fa tsy vitan’olon-tokana na fikambanana iray ny asa goavana tahaka itony fa mila fifarimbonana amin’ny hafa.
Ao anatin’ny andraikitra efa raisin’ny Ako Miantefa ankehitriny ny fampianarana valiha manaraka solfezy. « Mba hisian’ny fivelarana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, manaraka io fomba fampianarana zavamaneno maneran-tany io isika », hoy ny tompon’andraikitry ny fampianarana.